माटो चिन्ने यो सुनौलो अवसरको सदुपयोग गरौं « pennepal.com
नेपालमा झन्डै १७ लाख हेक्टर जमिनमा खेती गरिन्छ । कुल जनसंख््याको ६३ प्रतिशत जनता कृषिमा संलग्न रहेको मानिँदै आएकोे छ ।
Published On : 19 April, 2022 7:54 am By : केशब भट्ट
किन अवरुद्ध भयो तपाईको गला ?
माननीय रामकुमारी झाँक्रीज्यू, तपाईको आँसुको आशय के थियो ? संयोगले वा नियतवश पत्रिकाले तपाईको अनुहार